munamato - Nyambo dzino kodza mwoyo
Nyambo dzine tag 'munamato'
Haisati yava nemu namato
Hanzi Mfundisi akanzi huyai mundinamatirewo nemurwere. Paakasvika achida kunamata akavhunza kuti munonzwei, zvikanzi Ebola . Mfundisi akabva abuda achifambisa achiti haisati yavanomunamato wayo.
munamato ebola mufundisi
munamato bhazi mwari conductor munhenzva
munamato dofo rasta
Munamato wekuvhara Gore ra 2015
Munamato wekuvhara Gore
Mwari Baba tinokutendai nekuchengeta mwana wenyu arikuverenga izvi. Chimutungamirai muna 2016 pasina chinomutambudza. Baba ndinokumbira mwana uyu mugore ra2016 kuti:
Ngaasiyewo kunwa majolly juice azive kunewo 100% fruit juice
Asaite tea yekupisira asi azivewo ricoffy
Muvharirei nzira yekumupedzanhamo (bhero) azivewo kuti kwaEdgars neJet kune mbatya
Mota yake ngaisevhiswewo kuAmtec, Croco or Toyota Baba kwete pasi pemuti
Muziviseiwo kunaka kwemameat balls, beef,chicken, bream nekuti machunks haisi nyama uye beans handiwo wega usawi
Ndakumbira baba muradzikeiwo pafantasi yemubhedha arote hope dzeumambo kwete pabonde
Ngaazive Baba mabasa emba imwe naimwe (bedroom, kitchen, dining,lounge) kwete kuti arare mukitchen kunge cup
Muwaniseiwo 5 rand yekugara paseat ye kombi kwete kujairira kugara pakadoma
Murairidzeiwo nzira yekuchechi baba kwete yekumakuhwa
Nonewo musuwo wekwaSpar, Ok kwete kumashop emaChina kana maNigeria.
Ndinokumbirisa baba dzosaiwo zviuno zvevanakomana wechidiki panzvimbo kwete kuti bhurukwa rosungirwa kumabvi.
Neiwaya Baba zita renyu rigokudzwa nekasingaperi asizve
Chiitaiwo kuti azive kunaka kwekuverenga mabook kwete kuswerera iyoyi Watsapp zvaarikuita.
munamato zvidzidzo 2015 gore dzva
munamato wemwana anokara
Munamato wemwana anokara:
Mwari komborerai mai vangu vabike zvinonaka muvabvise mweya wakaipa wekundipakurira 1piece necup yemuto tumirai ngirozi yenyu yetsitsi nemakaro vandiramwire poto yese yehuku ishe dzingai vavengi vangu vanouya panguva dzekudya Amen.
munamato amai kukara chikafu nyama
munamato chando mvura kugeza chando cha 2017
munamato chando kugeza